In ka badan 800 oo tahriibayaal ah oo Ciidamada Libya ay qabteen – STAR FM SOMALIA
Dowladda Libya, ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay Dad Muhaajiriin ah oo doonaayay inay ka tahriibaan dalkaasi, una gudbaan dalka Talyaaniga.
Afhayeen u hadlay Dowladda Libya ayaa sheegay ciidamada ammaanka dalkaasi inay soo qabteen 7 doomood oo ay saaran yihiin in ka badan 850 ruux oo Muhaajiriin Tahriibayaal ah.
79 Haween ah ayaa ku jiray dadka gacanta lagu dhigay oo 11 ka mid ah ay yihiin Haween Uur leh, kuwaasi oo qayb ka ahaa dadka doonaayay inay tahriibaan.
Ciidamada ammaanka dalka Libya ayaa Doomahaan waxa ay ka qabteen Sabratha oo galbeedka ka xigta magaalada caasimadda ah ee Tripoli.
Arrintanina waxay imaanaysaa iyada magaalada Istanbul uu ka furmayo shirkii koobaad ee caalamku uu uga arrinsanayo arrimaha banii-aadminimada ee Qaramada Midoobay ay soo qaban qaabisay.
Ilaa hada ma cadda dalalka ay u kala dhasheen Muhaajiriintaan doonayay inay ka gudbaan Badda qatarta Badan ee ay ku nafwaayeen Boqolaal dad ah.
Dadka Somalida oo qayb ka ah dadka Tahriiba ayaanan ku tusaale qaadan dhacdooyinka naxdinta badan ee Badda ka dhaca.